Mashiinka Tani waa la qayb infrared in la siiyo off kulaylka, taas oo sahamin madax banaan, wuxuu qaadanayaa sare PID heerkulka caaqil, heerkulka gacanta ku si hufan.
kululaynta infrared kuma yeelan socodka sirocco. Ha saamayn ma wareega qayb. ku haboon oo dhan qayb ka ah, gaar ahaan qayb Micro BGA karaa.
Ay qaataan qaab-dhismeedka laambad gacanta lagu la socod dabacsan oo gacanta ku fudud. T835 ku haboon yahay dhibcood ka mid ah qayb ka flat, gaar ahaan qaybaha BGA, smd.
kululaynta infrared kuma yeelan socodka sirocco. Ha saamayn ma wareega yar component.Can ku haboon oo dhan ka kooban, gaar ahaan qayb Micro BGA.
Dhab ahaantii ka dhergin karo computer ah, xusuus qor ah, taga korontada iyo wixii la mid ah BGA ka dhagixiina way iska / dayactirka codsiga, si gaar gaar ahaan, dacwana xagga woqooyi computer iyo buundada koonfureed.
Ansixiyeen MCU iyo technology PID sare heerkulka caqli gacanta kululaynta & sare technology cabbirka heerkulka, heerkulka samaynaysaa saxda ah.
mashiinka waxa uu leeyahay xulashada shaqo xoog leh oo kaamil ah, iyadoo sideed hirarka heerkulka ee software xasuusta, waxaad dooran kartaa ruxruxo heerkulka saxda ah sida ay Alxan ah / unsolder codsiga.
sooco mishiinka ee infrared qayb aadka wax ku ool ah in la siiyo off kulaylka, taas oo sahamin madax banaan, ay qaataan PID sare technology kululaynta diiran maamula caaqil, kontaroolada hufan Kulaashaan.
Reflow Small foornada , Smt Reflow foornada , Lead Free Reflow foornada , infrared Reflow foornada , Lead Automatic Free Reflow foornada , kabida, Machine ,